घरघरै बिरामी, छैन परीक्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी बढिरहे पनि स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासनले परीक्षण बढाउन ध्यान दिएनन्
कैलालीमा १५–२० उमेर समूहमा रुघाखोकी, ज्वरो, वाकवाकी, टाउको र जीउ दुख्ने लक्षण
माघ ४, २०७८ प्रदेश ब्युरो
काठमाडौँ — देशभर कोरोना महामारी तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि सामान्य रुघाखोकी ठानेर परीक्षण नगर्नेको संख्या धेरै पाइएको छ । कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङसमेत हुन नसकेको अवस्थामा घरघरमै कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी बढेका छन् । सक्रिय संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै राख्दा परिवारका अन्य सदस्य पनि संक्रमित भइरहेको विज्ञले बताएका छन् ।
मकवानपुरको दुर्गम बस्तीमा कोरोनाको लक्षण भएका बिरामी घरपिच्छे देखिन थालेका छन् । तर, उनीहरूको परीक्षण गरिएको छैन । राक्सिराङ–६ सिलिङेका चेपाङ बस्तीका रुघाखोकी, घाँटी र जीउ दुख्ने बिरामी रहेको वडाध्यक्ष सिंंहलाल चेपाङले बताए । चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको उक्त क्षेत्रका अधिकांशले खोप लगाएका छैनन् । विशेषगरी चेपाङ बस्तीमा खोपबारे भ्रम फैलिएका कारण समस्या भएको राक्सिराङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख विजयकुमार कापरीले बताए । ‘गाउँपालिकाभर पहिलो खोप ४० प्रतिशतले लगाएका छन् भने दोस्रो खोप २७ प्रतिशतले मात्र लगाएका छन् ।’
यस्तै, दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षसहित १७ जना कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । जसका कारण सेवा प्रभावित बनेको अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सोमबारसम्म १ हजार ५ सय १० सक्रिय संक्रमितमध्ये १ हजार ४ सय ६५ जना होम आइसोलेसनमा छन् । तीमध्ये ४५ जना अस्पतालमा छन् । होम आइसोलेसनमा बस्नेबाटै कोरोना फैलिन मद्दत पुगेको छ ।
पोखरा महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेलका अनुसार घरमा एक जनालाई कोरोना देखिए पुरै परिवार संक्रमित हुने क्रम बढेको छ । सामान्य रुघाखोकी ठानेर पनि परीक्षण नगर्नेको संख्या धेरै रहेको उनको भनाइ छ । ३२ वटा वडा रहेको महानगरले हाल दिनमा एक ठाउँमा मात्रै परीक्षण गरिरहेको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल १५ संक्रमित भर्ना भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको अवस्था जटिल रहेको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा.शरद बरालले बताए । ‘ओमिक्रोनले ठूलो असर पुर्‍याउँदैन भनिए पनि हाम्रोमा आउने बिरामी गम्भीर छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमितबाटै धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सरेको छ ।’ लेखनाथमा रहेको प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रुघा, खोकीका लक्षण लिएर बिरामी आउने गरेको निर्देशक डा.विकास गौचनले बताए । ‘घरबाटै समुदायमा कोरोना फैलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सक्रिय संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमै राख्नु उचित हुन्छ ।’
दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सहरमा भने भीडभाड उत्तिकै छ । परीक्षण गरिएकामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण देखिने गरेको छ । ‘ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी अत्यधिक बढे पनि परीक्षण गराउनेको संख्या न्यून छ । हामीले खोप लगाएका छौं, ओमिक्रोनको प्रभाव धेरै छैन भन्ने देखिए,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख एकनारायण लम्सालले भने ।
पश्चिम नवलपरासीमा घरघरमै कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी छन् । तर परीक्षण बढाउनेतर्फ स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासनको ध्यान पुगेको छैन । पहिलो र दोस्रो लहरका बेला स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा धमाधम कोरोना परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन सञ्चालन गरेका थिए । जनप्रतिनिधि र मातहत कर्मचारीबाहेकको पीसीआर परीक्षण गराएका छैनन् । कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासनले ६ दिनका लागि सोमबारदेखि सेवा बन्द गरेको छ । नागरिकता, राहदानी, प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचय पत्रलगायत सेवा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए ।
रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा एन्टिजेन परीक्षण जारी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गौरव ढकालले बताए । भारतबाट आउँदा संक्रमण पुष्टि भएकालाई होम आइसोलेसनमा बस्न पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले ती संक्रमितको निगरानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ट्रेसिङ र परीक्षण पालिकामा सुरु भएको छ ।’
बाँकेका तीनवटा ल्याबमा परीक्षण गर्न आएकामध्ये आधाभन्दा बढीमा संक्रमण पाइएको छ । अहिले दैनिक २ सयको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको प्रयोगशालाले जनाएका छन् । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेजबहादुर वलीका अनुसार जिल्लामा अहिले १ सय ९० जना सक्रिय संक्रमित छन् । जसमा ८० प्रतिशत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रका हुन् ।
भेरी अस्पतालमा १५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । चिकित्सक खगेन्द्रजंग शाहले दीर्घ रोगीको उपचार भइरहेको बताए । उनले भने, ‘निमोनिया र अक्सिजन कम हुने समस्या कम छ, इन्फेक्सन सबैलाई देखिएको छ ।’
पछिल्लो एक सातायता पाल्पामा पनि संक्रमण बढेको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाले पालिका केन्द्रमा राखेको एकै दिनको परीक्षणमा ७८ जना पोजिटिभ देखिएका छन् । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले १० वटै स्थानीय तह, पाल्पा र रामपुर अस्पताललगायत स्थानमा कोभिड परीक्षण सहज बनाउन निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले सहज ढंगले परीक्षण अझै सुरु गरेका छैनन् । परीक्षणको दायरा बढाउन समन्वय भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका क्षयकुष्ठ अधिकृत विश्वनाथ न्यौपानेले बताए । पछिल्लो दिन संक्रमण बढेपछि मेला–महोत्सव र भीडभाडका कार्यक्रममा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताए ।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा घर फर्किनेको एन्टिजेन परीक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपुर
जनशक्ति अभाव भएपछि बर्दिया जिल्ला अस्पताल गुलरियामा संक्रमितका लागि निर्माण गरिएको भवन सञ्चालनमा समस्या आएको छ । २५ बेडको कोरोना अस्पतालमा २५ जना स्टाफ नर्सको आवश्यकता छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सुभाष पाण्डेयले तत्काल स्टाफ नर्ससहित १० जना चिकित्सक र एक जना आईसीयूका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता रहेको बताए ।
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित केही कर्मचारीलाई संक्रमण भएपछि दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । रोल्पामा पनि स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि संक्रमित भएका छन् । जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसहितका आधा दर्जन बढी स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । एक चिकित्सकका अनुसार संक्रमण नदेखिएका स्वास्थ्यकर्मीबाटै अस्पतालको सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रोल्पा अस्पतालका सूचना अधिकारी कुलबहादुर डाँगीले सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरे ।
कैलालीको धनगढी–५ तारानागरमा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, वाकवाकी, टाउको र जीउ दुख्ने लक्षणका बिरामी देखिएका छन् । उनीहरू १५–२० वर्ष उमेर समूहका छन् । अधिकांश बिरामी जचाउन गएका छैनन् । अभिभावकहरूले पनि वास्ता गरेका छैनन् । ‘मेरो नानी र छिमेकीका दुई बच्चाहरू तीन दिनदेखि ज्वरो आएर थन्किएका छन्,’ एक स्थानीयले भनिन्, ‘सञ्चो भइहाल्ला भनेर जचाउन पठाएकी छैन ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मीराज उपाध्यायले बालबालिका धेरै संख्यामा बिरामी परेको अनौपचारिक खबर आउने गरेको बताए । सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर उच्च छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सोमबार १५६ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ८९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. नीराजनदत्त शर्मा पौडेलले अस्पतालमा उपचारका लागि आउनेमा १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका अत्यधिक रहेको बताए ।
घरघरमा बालबालिकाहरू बिरामी पर्ने क्रम बढिरहे पनि कैलालीका बालबालिकाले अझै खोप पाउन सकेका छैनन् । कैलाली र डडेलधुराका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाइने भनिएको थियो । खोप नआएकाले उनीहरूलाई अहिलेसम्म खोप प्रदान गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए ।
बैतडीमा पनि बालबालिका बिरामी हुने क्रम बढेको छ । दैनिक २० देखि २५ जनासम्म रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर बालबालिका आउने गरेको जिल्ला अस्पताल बैतडीले जनाएको छ । अस्पतालका डा. वसन्तराज जोशीका अनुसार प्राय: सबै बालबालबालिका निमोनियाबाट थला परेका छन् ।
१५ महिने शिशुमा संक्रमण
१५ महिने शिशुमा पनि सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । परिवारका सबै सदस्यमा संक्रमण देखिएपछि उनको समेत परीक्षण गरिएको हो । शिशुमा सामान्य ज्वरो र रुघा देखिएको कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ । ‘परीक्षण गराउन नआएका मात्रै हुन्, बालबालिकामा कोरोनासँग मिल्दो लक्षण ज्वरो, रुघा र खोकी देखिन्छ,’ अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. गोविन्द रोकायाले भने ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०७:०७
काठमाडौँ — सोमबारदेखि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कोरोनाविरुद्धको बुस्टर (तेस्रो) डोज खोप दिन सुरु भएको छ । संघीय सरकारमार्फत प्राप्त खोप प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा गत असारअगाडि दोस्रो मात्राको खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायत अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरेको हो । तर, केही प्रदेशमा खोप नपुगेर बुस्टर अभियान सुरु भएको छैन भने केहीमा मंगलबारदेखि दिने तयारी भएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै बुस्टर डोज
मधेस प्रदेशमा फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै सोमबारदेखि बुस्टर डोज दिन सुरु गरिएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सोमबारदेखि प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई बुस्टर डोज दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठले सर्वसाधारणलाई बुस्टर डोज दिनका लागि तयारी भइरहेको बताए ।
‘हामी तयारीमा जुटेका छौं । केही दिनमै सर्वसाधारणलाई पनि बुस्टर डोज दिन सुरु गर्छौं,’ सचिव श्रेष्ठले भने । यता, धनुषा जनस्वास्थ्यका खोप अधिकृत राजदेव यादवका अनुसार खोप सामग्री उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखालाई पत्र लेखेर अनुरोध गरिएको छ ।
प्रदेशमा अहिलेसम्म ४८ प्रतिशतले कोरोना भाइरसविरुद्धको दुवै खोप लिइसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ को धनुषा, सप्तरी र पर्साबाहेक ५ जिल्लाका ८० प्रतिशत बालबालिकाले मोडर्ना खोप लगाइसकेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लामध्ये चार जिल्लामा सोमबारदेखि कोरोनाविरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन थालिएको छ । मकवानपुर, चितवन, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक गरी चार जिल्लामा बुस्टर डोज लगाउन थालिएको हो ।
रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा र नुवाकोटमा बुस्टर डोज मंगलबारसम्म पुग्ने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । हेटौंडामा सोमबारदेखि यहाँका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासन, अन्य फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई खोप लगाइएको छ । पहिलो दिनै १ हजार ३ सय जनालाई बुस्टर डोज लगाइएको स्वास्थ्यकर्मी भोला चौलागाईंले बताए । काभ्रेमा सोमबार १ हजार ९ सय ४५ जनालाई बुस्टर डोज लगाइएको छ । मंगलबारदेखि पालिकामा बुस्टर डोज लगाउने स्वास्थ्य शाखा काभ्रेले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा साँगाचोकगढी र बाह्रबिसे नगरमा कोरोनाविरुद्धको तेस्रो खोप बुस्टर डोज लगाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत पशुपति खनालका अनुसार दुई भेगमा सोमबार झन्डै चार सयलाई बुस्टर डोज लगाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाविरुद्धको तेस्रो मात्राको खोप (बुस्टर डोज) पर्याप्त छ । प्रदेशले सबै जिल्लामा खोप पठाइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्काले झन्डै २५ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशमा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहसमेत गरी १८ लाख जतिले खोप लगाइसकेको बताए । त्यसमध्ये दुवै खोप लगाएर ६ महिना पुगेका पहिलो चरणमा ७ लाखसम्म रहेको अनुमानका आधारमा बुस्टर डोजको खोप व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । ‘हामीलाई बुस्टर डोजको खोप पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘माघ १४ पछि ६० वर्षमाथिकालाई सुरु हुनेछ । अहिले जिल्लाहरूले योजना बनाएर खोप दिन सुरु गरेका छन् । केहीले योजना बनाउँदै छन् ।’
बागलुङ, गोरखा, पर्वतमा आइतबार र स्याङ्जामा सोमबारदेखि खोप लगाउन थालिएको छ । बागलुङमा ५ हजार खोप लगाउने योजना छ । ‘फेदीखोला गाउँपालिकाबाट बुस्टर डोज सुरु भएको छ, अब अन्य पालिकामा विस्तार गर्छौं,’ स्याङ्जा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बसुन्धरा शर्माले टेलिफोनमा भनिन् ।
म्याग्दी, लमजुङ, तनहुँ र कास्कीमा मंगलबारदेखि बुस्टर डोज सुरु हुँदै छ । मंगलबार स्वास्थ्यकर्मी र आगामी बिहीबारदेखि पालिकाका वडा तहबाटै खोप सुरु गरिने कास्की स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए । तनहुँको दमौली अस्पतालमा दैनिक र अन्य पालिकामा आवश्यकतानुसार खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको तनहुँ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले बताए । ‘बुस्टर डोज अभियान नियमितजस्तै सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने ।
मनाङमा सोमबारमात्रै २ हजार मात्रा खोप पुगिसकेको छ । अहिले हिउँ परेकाले स्थानीय घर छाडेर बेंसीमा झरेकाले तत्कालै खोप लगाउने योजना नरहेको स्वास्थ्य कार्यालय मनाङका प्रमुख बद्री आचार्यले बताए । ‘गाउँपालिकासँग सल्लाह गरी खोपको योजना बनाउँछौँ उनले भने । पूर्वी नवलपरासीमा मंगलबार बैठक बसेर खोपबारे निर्णय गरिने र मुस्ताङमा भने माघ दोस्रो सातापछि बुस्टर डोज दिइने भएको छ ।
लुम्बिनीमा ६० हजार बुस्टर डोज लगाइँदै
लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिडविरुद्ध बुस्टर (तेस्रो) डोज दिन सुरु भएको छ । संघीय सरकारमार्फत प्राप्त खोप प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा गत असारअगाडि दोस्रो मात्राको खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरेको हो । तर, मागअनुसार खोप प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा बुस्टर डोज लगाइँदै छ । यसअघि पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएका कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका, भाइजरलगायतका खोपको बुस्टर डोज आएको स्वास्थ्य निर्देशक विनोदकुमार गिरीले बताए । अघिल्लो माघ १४ देखि २४ र फागुन २ देखि १० गतेसम्म प्रदेशका ७८ हजार व्यक्तिले कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनेका खोप लगाएका थिए । उनीहरूका लागि १८ हजार डोज खोप अपुग छ । संघीय सरकारलाई उक्त खोप पठाइदिन आग्रह गरेको गिरीले बताए । ‘छिटोढिलो हो, खोप अभाव हुन्न भन्नेछ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले नै आवश्यक सबै खोप व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।’
रूपन्देहीमा सबैभन्दा बढी १६ हजार बुस्टर डोज खोप लगाइनेछ । सबैभन्दा थोरै रुकुम पूर्वमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने १५ सय जनालाई खोप लगाउन थालिएको हो । स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार बाँके, कपिलवस्तु र पाल्पा जिल्लामा भने आइतबारदेखि खोप लगाउन सुरु भएको थियो । सोमबार बर्दिया र दाङमा सुरु भएको छ । रुकुम पूर्वबाहेकका अन्य ६ जिल्लामा मंगलबारदेखि बुस्टर डोज लगाउने तयारी छ । अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई माघ १४ गतेसम्म खोप लगाइनेछ । यद्यपि, अपुग डोज कहिले कसरी आउने भन्नेबारेमा स्वास्थ्य निर्देशनालय नै अन्योलमा छ ।
भेरोसेल खोप लगाएकाका लागि भने माघ १४ पछि बुस्टर डोज लगाइनेछ । भेरोसेल धेरै व्यक्तिले लगाएकाले पहिलो चरणमा ६० वर्षमाथिका र दीर्घरोगीलाई बुस्टर डोज लगाउने तयारी गरेको फोकल पर्सन भण्डारीले बताए । ‘संघीय सरकारले दीर्घरोगी र ६० वर्षमाथिका व्यक्तिको तथ्यांक पठाउन भनेको छ । त्यसअनुसार प्रदेशभरको तथ्यांक संकलन हुँदै छ,’ भण्डारीले भने, ‘संख्याअनुसार नै संघीय सरकारले खोप पठाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा १९ लाख ४२ हजार ५ सय ६३ जना अर्थात् ५२ प्रतिशत जनसंख्याले दोस्रो खोप लगाएका छन् । पहिलो खोपमात्र लगाउने ३१ लाख ५७ हजार २ सय ९७ जना छन् । प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले छुटेकालाई खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ । प्रदेशमा ४ लाख डोज खोप भण्डारणमा छ ।
सुदूरपश्चिममा पुगेन खोप
सुदूरपश्चिममा बुस्टर डोजका लागि खोप मौज्दात नै छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीका अधिकारीहरूले हाल प्रदेशमा खोप मौज्दात नभएकाले आवश्यक खोपका लागि संघीय निकायमा माग गरिएको जनाएको छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बुस्टर डोजका लागि खोपको मौज्दात नरहेको बताएका हुन् । उनले मंगलबारसम्म प्राप्त हुने आश्वासन प्राप्त भएको बताए । ‘प्रदेशमा स्टक नभएकाले केन्द्रमा माग गरेका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ‘आफूसँग मौज्दात हुने पालिकाहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार बुस्टर डोज लगाउन भनेका छौं ।’
खोप मौज्दात भएका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड र प्राथमिकताका आधारमा बुस्टर डोज लगाउन भनिएको बताए । उनले कुनै पालिकाले बुस्टर डोज प्रदान गरे, नगरेको बारेमा भने जानकारी हुन नसकेको बताए । प्रदेशमा खोप प्राप्त हुनासाथ योजनाबद्ध रूपमा बुस्टर डोज प्रदान गर्ने कार्ययोजना तय गरिने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमका ७ वटा जिल्लामा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको भए पनि अत्यधिक जोखिममा रहेको कैलाली र डडेलधुराका बालबालिकाले भने अझै खोप पाएका छैनन् । यी दुई जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाइने भनिएको थियो । खोप नआएकाले उनीहरूलाई अहिलेसम्म खोप प्रदान गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र डडेलधुरामा उक्त उमेर समूहका लक्षित बालबालिकाको संख्या १ लाख २६ हाजर ४ सय ८४ छ ।
प्रताप विष्ट (हेटौंडा), दीपक परियार (पोखरा), अमृता अनमोल (बुटबल), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), नवीन पौडेल (परासी), रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), माधव अर्याल (पाल्पा), कमल पन्थी (बर्दिया), हरि गौम (रुकुम पूर्व) र काशीराम डाँगी (रोल्पा), अर्जुन शाह (धनगढी) भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), तृप्ति शाही (बैतडी)
प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०६:५३